Kuya kufuneka ubone i-Andaman kunye neNicobar Islands
Iziqithi zoLwandlekazi lwaseIndiya -Iziqithi ezingaphezu kweziqithi ezingamakhulu amathathu, zenza ikhonkco lezi ziqithi zibe yenye yeendawo ezingakhange ziphononongwe emhlabeni, kwaye ukhenketho lonyuka kutshanje kule ndawo yaseIndiya.
Iziqithi zeAndaman neNicobar
Akunakuba yinto ephosakeleyo ukuthi i-Andamans kunye neNicobar Islands ngokwenene zizigugu zeemerald ezikhazimla kumanzi aluhlaza olwandle lwaseIndiya.
Iilwandle ezintle ezinamanzi kwimibala engabonakaliyo eluhlaza okwesibhakabhaka, kunye nenkampani elungileyo yesibhakabhaka esicacileyo kunye neembono zamahlathi ashushu; Ukuthi oku yinto yokwenyani ngelixa kuchazwa le mimangaliso yendalo ikwindawo enzulu kunye neyona ndawo intle yolwandle.
Igunya lokungena kwilizwe laseIndiya ubonelele ngeendlela zale mihla zokufaka isicelo kwiVisa yaseIndiya. Oku kuthetha iindaba ezimnandi kubafakizicelo njengoko iindwendwe zaseIndiya kungasafuneki ukuba zenze idinga lokundwendwela ngokwasemzimbeni kwiKhomishini ePhakamileyo yaseIndiya okanye kwiNdlu yoZakuzo yaseIndiya kwilizwe lakho.
Urhulumente waseIndiya ivumela ukutyelelwa e-India ngokwenza isicelo I-Visa yaseIndiya kwi-intanethi kule webhusayithi ngeenjongo ezininzi. Umzekelo wenjongo yakho yokuya eIndiya inxulumene nenjongo yorhwebo okanye yeshishini, ke uyafaneleka ukufaka isicelo I-Visa yeshishini laseNdiya Kwi-Intanethi (iVisa yaseIndiya kwi-Intanethi okanye eVisa eIndiya yeShishini). Ukuba uceba ukuya eIndiya njengondwendwe lwezonyango ngenxa yezizathu zonyango, ukubonisana nogqirha okanye uqhaqho okanye impilo yakho, Urhulumente waseIndiya uyenzile I-Visa yezonyango yaseIndiya I-Intanethi iyafumaneka kwiimfuno zakho (iVisa yaseIndiya kwi-Intanethi okanye i-eVisa India ngeenjongo zonyango). I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya ekwi-Intanethi (I-Indian Visa Online okanye i-eVisa India yoKhenketho) inokusetyenziselwa ukudibana nabahlobo, ukudibana nezihlobo eIndiya, ukuya kwizifundo ezinje ngeYoga, okanye ukubona nokubona nokhenketho.
Kuya kufuneka ubone iHavelock, iPort Blair kunye neNeil Island kwiiAndaman Islands
Iziqithi zeAndaman zisisiqithi seziqithi, indawo yeziqithi ezikumazantsi eAndaman naseNicobar Islands. Iziqithi zeAndaman zezona zibona ukunyuka kokuthandwa kuwo onke amachwebakazi, phakathi kwabahambi abavela eIndiya nakwamanye amazwe, uninzi lwezinto ezinomtsalane ezikule ndawo.
Ezinye zezona zilwandle zintle kule ndawo zikwi-North Bay Island, ekumazantsi e-archipalago, nethuba lokuntywila emanzini acocekileyo olwandle i-Anadaman, ufumane umbono osondeleyo weekorale ezintle kunye nobomi baselwandle bendawo. Inkqubo ye- I-Andamans ikwalikhaya lamahlathi emangrove kwaye imiqolomba yelitye lekalika imi kwesinye seziqithi ezibizwa ngokuba yiBaratang, ekwayindawo yemveli yesizwe sommandla, esibizwa ngokuba sisizwe saseJarawa sama-Andamans, esinye sezona ziqithi zinkulu.
Ngaphandle koko, i Ikomkhulu lo Mzantsi Andaman isithili, EPort Blair, Inomtsalane owaneleyo kukhenketho losuku, kunye neMyuziyam yaseMarine Park kunye nentolongo yamaxesha ekoloniyali ebekwe embindini wayo. IPort Blair ineziqithi ezininzi ezikufutshane ezinolondolozo lwendalo kunye namahlathi akweleenjiko, ezinokutyelelwa zivela kumaziko amaninzi afumaneka kwikomkhulu lesiqithi uqobo.
Ipaki yeSizwe yeBandhavgarh.
Iilwandle eziBalaseleyo kwihlabathi
Elephants Beach kwiiIavelock Islands, Andaman
Uninzi lwezokhenketho lwamachwebakazi aseIndiya abekwe kuphela kwiziqithi zeAndaman, ezaziwayo emhlabeni kunye nolunye ugu lolwandle lwaseAsia. Unxweme lweRadhanagar yenye amalwandle aluhlaza aluhlaza eIndiya, iyenza kuluhlu lweelwandle ezisibhozo eziluhlaza elizweni.
Ifumaneka emazantsi eBay of Bengal, i Havelock kwaye Iziqithi zaseNeil ezinye zeendawo ezidumileyo zokuntywila ngesikhephe kunye nokuhamba ngesikhephe ngee-reef, kunye neelwandle zabo ezimhlophe zentlabathi ezimhlophe, uninzi lwazo ngokubanzi lubona isihlwele sabakhenkethi.
Ukuhamba elwandle kunye nokuntywila zizinto ezithandwayo kwezi ziqithi zeAndamans, uninzi lwazo lolwandle lubalaseleyo kule ndawo yesiqithi. Enye yeendawo ezidumileyo zeAndamans yi Isiqithi saseRedskin, Eyaziwa ngokuba yiPaki yeSizwe yaseMarine, izilwanyana zasendle kunye neglasi yokuhamba ngephenyane enemiboniso emihle yeekorale ezimibalabala.
Amakhulu eekhilomitha ubude besiqithi se-Andamans ukuya emantla kunye neNicobar emazantsi. Uninzi lwezinto ezinomtsalane kubakhenkethi kunye namabhishi aziwayo alala kwicala elingasentla leAndamans, kunye nemimandla yaseNicobar kunye neGreat Nicobar emazantsi ethintelwe ngaphandle koluntu.
Ilizwe likaThixo lelaseKerala kubakhenkethi baseIndiya.
Isiqithi saseNyakatho Sentinel, esinye seziqithi ezikwii-archipelago zaseAndaman, likhaya labantu baseSentinelese, isizwe esineengingqi zommandla ekukholelwa ukuba asikaze sidibane nabantu ngaphandle kwesiqithi.
Isizwe samaSentinelese, esihlala kwiSiqithi saseMantla naseMazantsi eSentinel, sizifihle ngokuzithandela kulo naluphi na unxibelelwano lomntu, kubonakala ngathi ngonaphakade. Isiqithi yenye yeendawo ezikhuselweyo kakhulu nguRhulumente, kunye Isizwe samaSentinelese sithathwa njengabantu bokugqibela ekunxibelelaneni nabo emhlabeni!
Isiqithi semoto iNicobar
Iziqithi zeNicobar ezikumazantsi eBay yaseBengal, ziseti zeziqithi ezihlukaniswe neThailand ngolwandle iAndaman ngasentshona. Iziqithi zaseNicobar ziindawo ezizimeleyo kunye neendawo ezingenabemi, kuphela ukufikelela kuvunyelwe kwizizwe nakubemi bommandla.
ICar Nicobar, ikomkhulu leZiqithi zeNicobar, nangona iyindawo ephucukileyo enezinto ezisisiseko ezikhoyo kodwa iziqithi zaseNicobar ziye zahlala zikumda kuye nawuphina umntu ovela eIndiya okanye phesheya. Abantu baseNicobarese sesinye sezizwe zakudala zaseIndiya, kwaye inkqubo yokuziqhelanisa nehlabathi langaphandle ngabantu bayo isaqhubeka nemida eyahlukeneyo kaRhulumente ethathela ingqalelo nawuphi na umsebenzi kule ndawo yesiqithi.
I-Andaman Islands, kunye neelwandle zayo ezifanelekileyo kunye nemisebenzi eyenzela indawo yeholide ezele ulonwabo kuwo onke amaxesha onyaka, nangona elona xesha lilungileyo lokundwendwela indawo lilele kwiinyanga zika-Okthobha ukuya kuMeyi. Ukuphonononga iindawo ezingaziwa kangako kwezi ziqithi okanye ukutyelela iindawo ezidumileyo, zombini ziyindlela yokujonga umbono ophefumlayo ngomfanekiso ogqibeleleyo wokuthatha ekhaya.
Abemi bamazwe amaninzi kubandakanya eunited States, Khanada, Fransi , Nyu Zilend, Ostreliya, Jemani , Swiden, Dominikha, Swizalend, ElamaTaliyane, Singapho , iunited Kingdom, banelungelo lokufumana iVisa yaseIndiya kwi-Intanethi (eVisa India) kubandakanya ukutyelela iilwandle zaseIndiya kwivisa yabakhenkethi. Umhlali kumazwe angaphezu kwe-180 esemgangathweni Indian Visa ekwi-Intanethi (eVisa India) ngokwe Indian Visa Ukufaneleka kwaye ufake isicelo seVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi enikezelwa yi Urhulumente waseIndiya.
Ukuba unawo nawaphi na amathandabuzo okanye ufuna uncedo kuhambo lwakho oluya eIndiya okanye iVisa yaseIndiya (ungafaka isicelo eVisa eIndiya), Indian Visa ekwi-Intanethi apha kwaye ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye ufuna ingcaciso kufuneka uqhagamshelane nayo IDesika yoNcedo lweVisa yaseIndiya ngenkxaso kunye nesikhokelo.